Isu-duwaha wasaarada haweenka & arrimaha qoyska ee gobolka Sanaag oo ku baaqday gargaar deg deg ah oo loo fidiyo dadka & duunyada ay abaaruhu saameeyeen. – Radio Daljir
Janaayo 28, 2011 12:00 b 0
Badhan, Jan 28 – Marwo Hodan Ismaaciil Maxamed oo tafaasiil ka bixisay saamaynta abaaraha ee dhul daaqsinka gobolka Sanaag ayaa sheegtay in raadka abaaraha si aad ah looga dareemayo gobolka Sanaag, walow ay is-dhaamaan.
Marwo Hodan waxaa ay sheegtay in illaa hadda aanay dad ku dhiman gobolka, balse ay qarka u saaran yihiin in ay u le’edaan oon, nafaqo darro, iyo macaluul; waxaa ay sheegtay in dadka intii la rari karay la keenay magaalooyinka, balse ay weli jiraan dad badan oo gargaar deg deg ah u baahan.
Dhinaca duunyada, marwo Hodan waxaa ay sheegtay in duunyo aad u badan oo isugu jirta geel iyo adhi ay u le’atay abaaraha dartood.
Guddiga abaaraha ee gobolka Sanaag ayaa ay sheegtay in ay diyaar u yihiin in ay bilaabaan daadgurayn, biya-dhaamis, iyo gargaar deg deg ah, balse aanay weli helin miisaaniyadii ay ku hawlgali lahaayeen, ayna ka war sugayaan maamulka gobolka iyo kan Puntland.
Waxaa ay ugu baaqday maamulka Puntland, hay’adaha samafalka, ganacsatada, iyo indheergaradku in ay xil gaar ah iska saaraan taakulaynta dadka iyo duunyada ay abaaruhu saameeyeen.
Gobollo badan oo ka mid ah Somaliya ayaa abaaruhu ay si ba’an u saameeyeen, walow raadka abaaruhu uu ku kala daran yahay.
Xasan Abuukar Cali ‘Baydhabo’,
Guddoomiyaha isboortiga gobolka Nuugaal oo ka hadlay horumarinta isboortiga gobolka & in isboortigu uu badbaadin karo dhallinta.